Ciidamada Xisbada Wilaayada Jubbooyinka oo Howlgal balaaran sameeyay iyo Sheykh Xasan Yacquub oo digniin u diray kuwa Ahlu Towxiidka ku beegsada Masaajidyada. | Halganka Online
Ciidamada Xisbada Wilaayada Jubbooyinka oo Howlgal balaaran sameeyay iyo Sheykh Xasan Yacquub oo digniin u diray kuwa Ahlu Towxiidka ku beegsada Masaajidyada.
Waxaa Gabal dhicii maanta soo gaba gaboobay Howlgallo balaaran oo ay ciidamada Xisbada Wilaayada Islaamka Jubbooyinka ka wadeen magaalada Kismaayo xarunta gobalka Jubbada Hoose oo xalay qarax khasaara dhaliyay ka dhacay.
Wararka nagasoo gaaraya magaalada Kismaayo ayaa xaqiijinaya in Ciidamada Xisbada ay caawa ilaala xoogan ka hayaan goobaha lagu cibaadaysto ee magaalada Kismaayo si ay u baacsadaan dhagar qabayaashii xalay qarxiyay Masjidka magaalada Kismaayo.
Ciidamada Xisbada oo maanta oo idil howlgallo weday ayaa ku guulaystay in ay gacanta kusoo dhigaan dad lagu tuhunsanyahay in ay wax ka ogaayeen qaraxii xalay ka dhacay Masjid ku yaala xaafadda Guul wade magaalada Kismaayo.
Sheykh Xasan Yacquub Abul Cabaas Madaxa Dacwada iyo Tacliinta Wilaayada Islaamiga Jubbooyinka oo maanta ka istaagay Masjid ku yaal magaalada Kismaayo ayaa lahjad adag kula hadlay qolooyinka cadawga u shaqeeya ee doonaya in ay baqdin geliyaan Ahlu Towxiidka alle ku caabuda masaajidda.
Abul Cabaas wuxuu weeraradaasi ku tilmaamay kuwii lagu yaqiin Cadawga Islaamka islamarkaana alle ku sheegay qur’aankiisa oo kuwa aan Muslimka ahayn ay dhib oo dhan lajecelyihiin Muslimiinta.
Amaanka Kismaayo oo aad u wanaagsan ayaa Caawa lasoo sheegayaa in shacabka iyo Ciidamada Xisbada iska kaashanayaa sidii loo baari lahaa cid walba oo lagu tuhunsanyahay in ay cadawga u shaqayso.
« Wilaaya islaamiga Banaadir oo faah faahisay Dagaal shalay ka dhacay Hodon iyo Waaberi ee magaalada Muqdisho Maleeshiyaadka Mushrikiinta iyo kuwa Dowlada KMG ah oo Haweenka Muslimaadka gacmahooda uga fiiqayay Indha shareerka iyo Xijaabka Adag Wadada Dabka ee magaalada Muqdisho. »